မန္တလေးပဲကြော် | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
← မန္တလေးနန်းကြီးသုတ်(ခ) ကြာဇံကြီးသုတ်
မန္တလေးပဲကြော် ကို အိသက်အမေကမုန့်ဟင်းခါး ထဲ ထဲ့စားတတ်တယ်။ အိသက်ကတော့ ဒီတိုင်းလေးပဲ စားရတာကြိုက်ပါတယ်။ ။ ဂျင်းနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ စားလို့ကောင်းတဲ့ မန္တလေးပဲကပ်ကြော် ကြော်နည်းလေးပါနော်။ ညီမလေးတယောက် မေးထားတာလေး postတင်ဖို့ အကြွေးရှိနေလို့ လုပ်စားဖြစ်တုံးလေး တင်ပေလိုက်ပါတယ်။
– red bean ဆန်ချိန်ခွက်၁ခွက် (ပဲလွန်းရရင် ပဲလွန်းနဲ့လုပ်ပါ) or red kidney bean tin
-ပျဉ်တော်သိမ် အနဲငယ် ဓားနုတ်ပေါက်ပြီး
ပဲများကို နူးသွားအောင် ပြုတ်လိုက်ပါတယ်။ ရေအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ပဲကို ချေပါသည်။
ဆား၊ဆော်ဒါ၊ ဂျင်း၊ပျဉ်တော်သိမ်, ကြက်သွန်ဖြူ ထောင်းထားတာများ ရောမွှေကာ မီးအေးအေးနှင့်ကြော်ပါသည်။
ကြော်နေရင်းနဲ့ကိုဂျင်းနံ့သင်းနေတဲ့ မန္တလေးပဲကြော်လေး ရပါပြီ။
16 comments on “မန္တလေးပဲကြော်”
26/05/2012 @ 8:26 am
28/05/2012 @ 6:41 pm
15/07/2012 @ 2:41 am
ဆန်ချိန်ခွက်ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာပါလဲ ၊ ဓါတ်ပုံထဲမှာတော့တွေပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ အရွယ်ကိုခန့် မှန်း၍မရပါ ၊ နောက်ပြီး ဆန်ချိန်ခွက်ဆိုတာ တနေရာမှာရှိပေမဲ့ တနေရာမှာရှိချင်မှရှိမှာပါ ၊ တနေရာကဆန်ချိန်ခွက်ဟာ အခြားတနေရာက ဆန်ချိန်ခွက်နဲ့ size လဲတူချင်မှတူပါလိမ့်မယ် (နိုင်ငံတကာကကြည့်ကြတာမို့ ပါ) ၊ ဒါကြောင့် ဗမာပီပီ နဂါးနီ ၊ နို့ ဆီဗူး တဝက် ၊ တဗူး ၊ နို့ ဆီဗူး၃လုံး စသဖြင့်စံပြုပေးရင်ပိုမကောင်းဘူးလား ။ နို့ ဆီဗူးတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိပြီး တချို့ ဗမာများဟာ နိုင်ငံခြားရောက်နေသည့်တိုင် နို့ ဆီဗူးကိုသာစံပြုအသုံးချနေဆဲမို့ ပါ ။ ဆွေးနွေးကြည့်တာပါ
17/07/2012 @ 7:27 pm
ဆန်ချိန်ခွက်ဆိုတာ rice cooker တိုင်းမှာပါတဲ့ဟာကို ရည်ရွယ်ပါတယ်၊ ကျမက အချိုးအစားလောက်သာရေးပေးတာပါ လိုက်လုပ်ကြည့်တဲ့သူများကနို့ဆီဗူးတို့ ဇွန်းတို့ ကြိုက်ရာနဲ့ အချိုးအစားအလျှော့အတင်း လုပ်ကာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးတဲ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးပါ၊
kyaw lin tun
29/07/2012 @ 8:53 am
အားပေးလျှက် ပါ ..များများလေးတင်ပေးပါ…..စားးးးချင်ထှာ….း)
31/07/2012 @ 7:00 pm
12/09/2012 @ 1:29 pm
လုပ်စားပြီးပြီ ရေများသွားလို့ဇွန်းနဲ့ခပ်ထဲ့လိုက်ရတယ်း)ဒါပေမဲ့လည်းကောင်းပါတယ် ကြိုက်တယ်
12/09/2012 @ 2:58 pm
အမ ကြော်စားပြီးသွားပါပြီ အရမ်းစားလို့ကောင်းပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမ :)…..
13/10/2012 @ 2:04 am
မအိသက်ရေ….. ပဲတစ်ခွက်ကို ပြုတ်လိုက်ရင် ဘယ်နှစ်ခွက်လောက် ရပါသလဲ… ပြုတ်ပြီးသား သံဗူးနဲ့လာတဲ့ ပဲကို သုံးမလို့ပါ…. ကျေးဇူးပါနော်…
15/10/2012 @ 9:20 am
သံဘူးဆိုရင် မပြုတ်နဲ့တော့ ချေလိုက်လိုရပြီ 🙂
20/08/2013 @ 4:38 am
ကျေှးဇူးပဲ အိသက်ရေ …. ဒီတစ်ပတ် လုပ်စားကြည့်ဦးမယ် …
20/08/2013 @ 7:08 pm
21/08/2013 @ 6:34 am
မအိသက်ေ၇… မန္တလေးပဲကပ်ကြော်ကိုစားချင်နေတာကြာလှပေါ. အခုအစ်မလုပ်နည်းတင်ပေးထားတဲ.အတွက် တကယ်စား၇တော.မှာ.. အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမလည်းဒီထက်လုပ်နည်းလေးတွေအများကြီးတင်ပေးနိုင်ပီး ဒီ.ထက်မကပျော်ရွင်တဲ.မိသားစုဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်..
25/08/2013 @ 2:57 pm
payy tae su nae pyae par say shint 🙂
28/01/2015 @ 3:49 am
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမ။ ဒီနည်းအတိုင်းမနေ့ကကြော်လိုက်တယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်
16/06/2015 @ 9:46 am
Thx par Ei yay.
My husband like it so much but I don’t know how to make now I got it .
Bless ur family.
LeaveaReply to kokolay Cancel reply